तीन औषधि जसले सम्बन्धलाई प्रेमिल बनाउँछ !! | सुदुरपश्चिम खबर
तीन औषधि जसले सम्बन्धलाई प्रेमिल बनाउँछ !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ २८, २०७८ 2
सामान्यतया, वैवाहिक सम्बन्धमा सबैभन्दा समस्याको कुरा भनेको समयको कमी हो । पार्टनरहरु आफ्नो धेरैजसो समय कामको कारण घर बाहिर बिताउँछन् । पछिल्लो एक वर्ष घरबाट काम गर्ने अधिकांश मानिसमा घरमै त बसे तर परिवारसँग महत्वपूर्ण समय रमाइलो गरेर बिताउन पाएनन् ।
अर्काेतिर विवाहित जोडीहरु निषेधाज्ञाको समयमा यति धेरै घरमा बसे कि त्यति उनीहरु कहिलै बस्ने गरेका थिएनन् । सँगै समय बिताउनुको मतलब सम्बन्धमा नजिक आउनु हो । हामी यो निश्चित रुपमा भन्न सक्दैनौं । अझै पनि विवाहित सम्बन्धमा कतिपय गुनासाहरु हुन्छन् । निषेधाज्ञाको समयमा यस्ता गुनासाहरु झनै थपिएका छन् ।
गुनासो विश्वव्यापी सत्य हो, हामी यो मानेर त्यसै बस्न सक्दैनौं । गुनासो र कटुताको आवृत्ति कम गर्नका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । गुनासोलाई गहिरिँदै जान दिनुहुँदैन । यहाँ त्यस्ता साना औषधिको सुझाव दिइएको छ जसले सम्बन्धमा प्रेम बढाउन भूमिका खेल्छ ।
पहिलो औषधि : साझेदारीले प्रेम बढ्छ, रिमोट कन्ट्रोल पनि सेयर गर्नुहोस्
हिजोआज सबैको आफ्नै स्मार्टफोन हुन्छ । यसका बाबजुद घरको ठूलो पर्दा यानी टिभीको आफ्नै महत्व हुन्छ । हाम्रो सबै काम पूरा गरिसकेपछि, मोबाइलबाट दूरी बनाउने नाममा हामी प्रायः टिभीमा रमाउने गर्छाैं ।
टिभीमा के हेर्ने भन्नेमा परिवारका सदस्यहरुको मत विभाजन हुन्छ । पतिपत्नीबीच नै पनि यस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सँगै बसेर एउटै च्यानलमा सँगै रमाएर हेर्न सकियो भने यसले प्रेम बढाउँछ । आफ्नो साथीले खोजेको च्यानल लगाउन सहजै रिमोर्ट दिनु पनि एक प्रकारको स्नेहको स्रोत बन्न सक्छ । यदि यो सम्भव भएन भने दुवैले सहमतिमा टिभी बन्द गरेर एकअर्काबीच कुराकानी गरेर पनि स्नेह बढाउन सकिन्छ ।
दोस्रो औषधि : स्पर्श
एकअर्कालाई गरिने स्पर्श आफैँमा सम्बन्ध बढाउने उपाय हो । यसले सम्बन्धलाई पुनर्जीवित गर्न ठूलो भूमिका खेल्छ । बस याद गर्नुहोस्, सम्बन्धको प्रारम्भिक दिनहरुमा यदि एक अर्काको हात समाएर हिँड्दा कति स्नेह बढ्ने गर्दथ्यो ? निःसन्देह स्पर्श जीवनकाल भरको लागि बढी हुन सक्दैन । तर स्पर्शको महत्व रहनेछ । हामी शरीर मालिस गरिदिने, टाउको मालिस गरिदिने जस्तो प्रक्रियाबाट पनि एकअर्कामा स्पर्श गर्न सक्छौं । कहिलेकाहीँ तपाईं दुवै एकअर्कालाई हल्का तातो तेलको प्रयोग गरेर पनि मालिस गर्न सकिन्छ । यसले पनि माया बढाउन सहयोग गर्ने गरिन्छ ।
तेस्रो औषधि : सबै कुरा बोल्न सकिँदैन, लेखेर दिनुस्
अहिलेको पुस्तामा लेखन परम्परा हरायो । पहिलेपहिले एकअर्कालाई प्रेमको सन्देश पठाउने पत्र नै थियो । सबै कुराहरु बोलेर मात्र व्यक्त गर्न सम्भव छैन । त्यसैले अहिले पनि कतिपय व्यक्त गर्न नसक्ने कुराहरुलाई लेखेर दिनुहोस् । सबै कुरा लेख्न सम्भव छैन भने यसलाई इमोजीको मार्फत्बाट पनि व्यक्त गर्न सकिन्छ । इमोजी स्वचालित भावनाहरुको प्रसार गर्ने एउटा साधन हो । प्राविधिक उपायपछि अलिअलि लेख्ने कोसिस गर्नुहोस् । जुन कुरा सुनाउन सकिँदैन । त्यसलाई सन्देशमा व्यक्त गर्नुहोस् ।
यसको कारण यो हो जब हामी कागजमा लेख्न थाल्छौं, तब लेख्न लागिएको मान्छेको तस्वीर दिमागमा सेट हुन्छ । हामी उसैसँग सम्बन्धित सबै राम्रो र नराम्रो कुराहरु सम्झन थाल्छौं । त्यसमा हामीले नराम्रो कुरा नलेखेर राम्रो कुरा मात्रै कागजमा समेट्ने गर्छाैं । जसले एकअर्कामा प्रेम बढ्न जान्छ । अनलाइनखबर बाट सभार